महोत्सवले जिल्ला भित्र पनि कुखुराको खपत बढाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ – जागरण अनलाइन
सबै समाचार / अन्तर्वार्ता, समाचार /
महोत्सवले जिल्ला भित्र पनि कुखुराको खपत बढाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ
२०७५ पुष २४, मंगलवार १९:४२ मा प्रकाशित
महेन्द्र बुढाथोकी, उपाध्यक्ष सुरक्षित कुखुरा तथा दाना व्यवसायी समिति, दाङ
‘कुखुरापालन एवं बजारीकरणको विकास, परनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको निकास’ भन्ने नाराका साथ सुरक्षित कुखुरा तथा दाना व्यवसायी समिति दाङले आगामी माघको १० गतेदेख घोराहीमा ५ नं. प्रदेशस्तरिय प्रथम पोल्ट्री महोत्सव तथा प्रदर्शनी–२०७५ आयोजना गरेको छ । महोत्सवको दिन नजिक आउँदै गर्दा तयारी लगायत समसामयिक विषयमा महोत्सव आयोजक मुल समितिका प्रदर्शनी निर्देशक तथा सुरक्षित कुखुरा तथा दाना व्यवसायी समिति दाङका उपाध्यक्ष महेन्द्र बुढाथोकीसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ सोही कुराकानी । (सम्पादक)
दाङ जिल्लामा विगतमा अन्य खालका महोत्सव आयोजना हुँदै आएका थिए तपाईहरुले पोल्ट्री महोत्सव आयोजना गर्दै हुनुुहुन्छ । यस्तो खालको महोत्सव किन आयोजना गर्नुप¥यो ?
दाङ जिल्ला कुखुरा उत्पादनका हिसावले नेपालकै अव्वल जिल्लाका रुपमा रहेको छ । लामो समयदेखि यहाँ कुखुरापालन हुँदै आएको छ । अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । दाङ जिल्ला चितवनपछि राम्रो जिल्ला मानिन्छ त्यसैले यहाँका व्यवसायीहरुलाई उत्साहित गर्न र बजार प्रवद्र्धन गर्नका लागि महोत्सव आयोजनागर्न लागिएको हो । अझ अर्को कुरा के छ भने विगतमा अन्य खालका महोत्सव आयोजना गरिन्थे । हामीले नयाँ विषयमा महोत्सव आयोजना गर्न थालिरहेका छौं । यो पनि महोत्सवको विषय बन्न सक्छ भन्ने सोचेर नै ५ नं. प्रदेशस्तरिय प्रथम पोल्ट्री महोत्सव तथा प्रदर्शनी–२०७५ आयोजना गरिएको हो ।
यो महोत्सवबाट कसलाई फाइदा हुन्छ ?
बाहिरबाट हेर्दा त कुखुरा व्यवसायमा जोडिएकाहरुलाई बढी फाइदा हुन्छ । तर सुक्ष्म रुपमा हेर्दा दाङ जिल्लालाई नै फाइदा हुन्छ । यो महोत्सवमा किसानलाई प्रविधिका बारेमा जानकारी दिइनेछ । यस्तै आफूहरुले गरिरहेको कामको समिक्षा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । अरुले कसरी व्यवसाय गरिरहेका छन् । कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी हुनेछ । राष्ट्रिय रुपमा मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि कुखुरापालन कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा किसानलाई जानकारी हुनेछ । यसमा मासुका लागि कुखुरा पालन गर्नेहरुले आवश्यक जानकारी लिनेछन् । दाना उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्नेलाई प्राविधिक ज्ञान हासिल हुनेछ । यसैगरी ह्याचरी संचालन गरिरहेकाहरुलाई पनि फाइदा हुनेछ ।
जिल्लाले समग्रमका के फाइदा फाउँछ त ?
५ नं. प्रदेशस्तरिय प्रथम पोल्ट्री महोत्सव तथा प्रदर्शनी–२०७५ भनेर हामीले जिल्लामा पहिलो पटक आयोजना गरिरहेका छौं । दाङमा भन्दा पहिले काठमाडौं र चितवनमा मात्रै यस्तो अभ्यास भएको छ । दाङ जिल्लाको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि महोत्सवले सकारात्मक सन्देश दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
कस्ता स्टलहरु राख्दै हुुनुहुन्छ ?
खासगरी हामीले कुखुरा व्यवसायीलाई लक्षित गरेर स्टल राख्दैछौं । स्टल राख्नका लागि दाना उद्योगहरुसंग कुरा भएको छ । यसैगरी ह्याचरी उद्योगसंग कुरा भउको छ । पोल्ट्री व्यवसायीहरु आउँदै हुनुुहुन्छ । होटलहरु राख्दैछौं जसमा कुखुराका परिकारहरु मात्रै राखिनेछन् । यो महोत्सवबाट कुखुराबाट के कस्ता परिकार बन्दछ भन्ने बारेमा आम उपभोक्तालाई जानकारी हुनेछ । यसैगरी सरसफाई कसरी गर्नुपर्छ । व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने सम्मको जानकारी हुनेछ । अर्को हिसावले भन्ने हो भने प्रदर्शनी र स्टलबाट हामीले समग्र कुखुरा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने कुरालाई नै ध्यान दिनेछौं ।
यो महोत्सव के कारणले फरक रहनेछ ?
हामीले पहिलो पटक यस्तो योजना बनाएका छौं जसले गर्दा सरकारी निकायले पनि हामीलाई प्रोत्सासन गरिरहेको छ । दाङ जिल्ला कुखुरा व्यवसायका लागि निकै राम्रो हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा महोत्सवले समग्र कृषि क्षेत्रलाई पनि नयाँ मोड दिनेछ । अर्को कुरा विगतका महोत्सवमा विभिन्न बस्तुहरु विक्रिका लागि राख्ने र त्यसमा पनि बाहिरका व्यवसायीहरु हावी हुने स्थिती थियो । यो महोत्सवमा हामी त्यो कुराको अन्त्य गर्दैछौं ।
कुखुरा र अण्डाका हिसावले दाङ जिल्लामा कस्तो सम्भावना रहेको छ ?
हामीले धेरै बर्ष अघि देखि चितवन कुखुरा उत्पादनका हिसावले नेपालमै पहिलो जिल्लाका रुपमा रहेको छ भन्दै आइरहेका छौं तर मेरो विचारमा हामी चितवनको हाराहारीमा पुगिसकेका छौं । दाङ जिल्लाका व्यवसायीले उत्पादन गरेका अण्डाहरु १२–१५ जिल्लामा गइरहेका छन् । यहाँ ८–१० वटा ह्याचरी उद्योग शुरुवात भएका छन् । जहाँबाट कुखुराका बच्चाहरु उत्पादन गर्ने काम हुन्छ । विगतमा कुखुरापालन गर्नेले बाहिरबाट मगाउनुपर्ने अवस्था थियो । अव हामी विस्तारै कुखुरामा आत्मनिर्भर हुँदैछौं । अण्डा र कुखुराको कुरा गर्ने हो भने हामीले बाहिर निर्यात गरिरहेका छौं । हरेक दिन लाखौ अण्डाहरु दाङ देखि बाहिरका जिल्लामा गइरहेको छ । यसैगरी कुखुरा पनि हरेक दिन बाहिरका जिल्लामा गइरहेको छ । यो सवै अवस्था हेर्दा दाङ जिल्ला कुखुरा र अण्डाका हिसावले नेपालमै अव्वल जिल्लाका रुपमा रहेको छ ।
दाङ जिल्लामा कुखुरा व्यवसायमा कति मानिस यसमा आवद्ध रहेका छन् नि ?
अहिले जिल्लामा यो व्यवसायमा लागिरहेकाहरुको संख्या एक हजार पाँच सय जति होला । यो प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या हो । यो भन्दा बाहेक पाँच–सात हजारले त रोजगार पाएका होलान् । यस्तै अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउनेहरुको संख्या धेरै रहेको छ । जिल्लाका कुखुरालाई व्यवसाय बनाउनेहरुको संख्या यो भन्दा धेरै रहेको छ । प्रेस हाउस खोलेर व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या पनि सयौं होला । यसरी हेर्दा यो क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाको लगानी र हजारौंले रोजगार पाइरहेका छन् ।
कुखुरा सवैले नखाने पंक्षिका रुपमा रहेको छ । यो महोत्सवले मानिसमा कुखुरा खाने बानीको विकास गर्न सघाउ पु¥याउला ?
पक्कै पनि हामी आशावादी छौं । हामीले महोत्सवमा कुखुरा कसरी खाने भन्ने तरिकाका बारेमा पनि सिकाउँछौं । बाहिरका व्यवसायीलाई बोलाएर राम्रा होटल राख्ने योजना बनाएका छौं । यसबाट सरसफाई कसरी गर्ने, के कस्ता आइटमहरु बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा ज्ञान हुनेछ । यसैगरी हामीले बाहिरबाट आउनेहरुलाई स्टल निशुल्क उपलव्ध गराउने योजना बनाएका छौं यसको बदलामा हामीले भनेका छौं तपाईहरुले सर्वसुलभ मूल्यमा परिकार उपलव्ध गराउनुपर्छ । यसरी हेर्दा यो महोत्सवले मानिसको कुखुरा खाने बानीमा पनि विकास गर्ने अपेक्षा छ ।
किसानलाई कुखुरापालन सम्वन्धी सिप सिकाउने योजना के छ नि ?
हामीले प्राविधिकहरुलाई ल्याएर सिप सिकाउने योजना बनाएका छौं । कसरी कुखुरा पालन गर्ने ? अहिलेसम्म कसरी पालना गरिएको छ ? आगामी दिनमा कसरी पाल्नुपर्ने रहेछ । भन्ने कुरा पनि सिकाउनेछौं । रोग लाग्दा के गर्ने ? कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा पनि सिकाउँछौं । सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त हामीले सरसफाईलाई ध्यान दिनेछौं । महोत्सवमा राखिएका स्टलमा आएर जो सुकैले पनि खान सकोस भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । यसैले हामीले यसलाई फुड फेस्टीवल पनि भनेका छौं । फुड फेस्टीवलमा आएर आफ्नो इच्छा अनुसारको परिकार खानसक्ने बातावरण बनाउने हाम्रो योजना छ ।
महोत्सवले बजार बृद्धिमा सघाउ पु¥याउला त ?
दाङ जिल्लामा जति कुखुरा उत्पादन भइरहेको छ यसको बजार यहाँ सानो रहेको छ । यहाँ कुखुरा र अण्डाको उत्पादन धेरै तर माग कम रहेको छ । कुखुराको उत्पादनका हिसावले राम्रो रहेको दाङ जिल्ला भित्र पनि खपत बढाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
अन्य निकायको कस्तो सहयोग रहेको छ ?
हामी तयारीको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेका छौं । यो बीचमा हामीले प्रदेश कृषि मन्त्रीलाई भेट्यौं । उहाँले हामीले गर्ने काम तपाईहरुले गर्न थाल्नुभएछ भनेर हौसला दिनुभएको छ । यसले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ । यसैगरी अन्य निकायमा पनि प्रपोजलहरु तयार गरेर पठाएका छौं । गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा पुगेर पनि हाम्रो कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका छौं । समग्रमा महोत्सवको आयोजनाले हामी उत्साहित भएका छौं ।
यो हामीले आयोजना गरेको भएपनि सवैको महोत्सव हो । दाङ जिल्लामा नयाँ प्रयोग गर्न थालिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा सवैको सहयोग हुनुपर्छ । यो सवैको सरोकारको विषय हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । यसलाई सवैले सहयोग गर्नुपर्छ । दाङ जिल्ला पोल्ट्रिका हिसावले देशमै उत्कृष्ठ रहेको छ । यो महोत्सवपछि जिल्लाको पोल्ट्रि व्यवसाय झनै फस्टाउने विश्वास हाम्रो रहेको छ ।
राप्ती पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकबाट
सबै पक्ष मिलेर कर र महंगी नियन्त्रण गर्न सक्छौं,दाङको गरीमा र प्रतिष्ठा बनेको राप्ती स्वास्थ्य प्रष्ठिान प्रभावकारीरुपमा चलाऔँ २०७५ पुष २४, मंगलवार १९:४२
पश्चिम दाङको विकासका लागि उमेदवार बनेको हुँ-वली (भिडियोसहित) २०७५ पुष २४, मंगलवार १९:४२
अनन्त घिमिरे भन्छन् यसकारण शंकर पोखरेल मुख्य मन्त्री (भिडियोसहित) २०७५ पुष २४, मंगलवार १९:४२